HTZ’s Blogs Are Now On FaceBook Page | My Burmese Blog
HTZ’s Blogs Are Now On FaceBook Page	On March 23, 2011	by Htoo Tay Zar	With	6 Comments	- Blogging	ဒီနေ့တော့ ဘ​လော့ဂ် ရဲ့ FaceBook Page အကြောင်းကြော်​ငြာ ဝင်​ပါ​တယ်။ FaceBook ပေါ်​မှာ ကွ​ျန်တော်​့​ရဲ့ အခု လက်​ရှိ My Blog နဲ့ အဂ​လိပ်​လို​ရေး​တဲ့ ဘ​လော့ဂ် ၂ ခု​လုံး အတွက် Page ၁ ခု​ဆောက်​ထား​ပါ​တယ်။ အစ​က သက်သက်​စီ​ခွဲ​ဦး​မ​လို့ မဟုတ်​လဲ အတူတူ​ပဲ​ဆို​တော့ ၂ ခု​လုံး​ကို စု​ပြီး HTZ’s Blogs ဆိုပြီး လုပ်​လိုက်​တာ​ပါ။ Like လုပ်​ပေး​ကြ​ပါ​ဦး။
Like လုပ်​ထား​ရင် ဘာ​ရ​မ​လဲဆို​တော့ ဘာ​မှ​မ​ရ​ပါ​ဘူး ပို့စ်​အသစ်​တင်ရင် ချက်​ခြင်း​သိ​ရ​မယ့် အခွင့်​အရေး​ရှိ​ပါ​တယ်။ နောက်​ပိုင်း အချို့ ပို့စ်​အတို​လေး​တွေ၊ သ​တင်း​တွေ၊ ဓာတ်​ပုံ​တွေ live တွေ​ကို FaceBook Page မှာ​ပဲ တင်​ပါ​မယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း​က​နေ ဘ​လော့ဂ်​ရေး​တာ​က​မလွယ်​လို့​ပါ။ FaceBook ကတော့ အဆင်​ပြေ​တယ်။ ကျေးဇူးပြု​ပြီး အခု ဒီ​ပု​ိ့စ်​မှာ​ပါ​တဲ့ Like နှိပ်​ပေး​ပါ ဒါ​မှ​မဟုတ် ဆိုဒ်​ဘား​မှာ​လဲ ထည့်​ထား​ပါ​မယ်။ အားပေး​ကြ​ပါ​ဦး​လို့။ Blogging	6 Comments	Thet
Nyi, seems your link is broken.
Like or Dislike:00	MrDBA
အားပေးကြပါဦးလိုပ ဆိုတဲ့ ပြေပုံလေး ကြိုက်သဗျာ … ဟေးဟေး
Like or Dislike:00	Htoo Tay Zar
@ Bro Thet ~ It’s working fine on my browser bro. Let me know problem still occurring. Thanksalot for support bro =D
@ Bro DBA ~ ကွျန်တော်တို့ မင်းသား​တွေ အဲ ဘ​လော့ဂ်​ဂါ​တွေ​ဆို​တာ စာ​ဖတ်​သူ အား​ပေ​မး​ှု​နဲ့ ရပ်​တည်​နေ​ရ​တာ​ပါ ခင်ဗျာ =D
Like or Dislike:00	Thet
Nyi, It is still not accessible from here. Seems, your page is blocked here in Thailand, it does mentioned “The page you are trying to access is restricted or unavailable”. Even I copied the link into address bar, it will bring back to my facebook home page. it’s weird. Anyway, I have added you in fb as friend.
@ Bro Thet ~ So Really They banned my Blog page. =D I’ve no idea why. Thanksalot bro Like or Dislike:00	Myo Kyaw Htun
I can’t access your fan page. Why? just link broken or facebook doesn’t allow you to create the page?
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=5+0Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts